Dal Caan ah oo soo saaray Mootadii ugu horeeysay oo Musqul leh iyo Dad badan oo layaabay (Daawo yaabka Dunida ka taagan ) !! - iftineducation.com
Dal Caan ah oo soo saaray Mootadii ugu horeeysay oo Musqul leh iyo Dad badan oo layaabay (Daawo yaabka Dunida ka taagan ) !!
aadan21 / August 31, 2012
iftineducation.com – Shirkad laga leeyahay dalka Japan ayaa waxeey noqotay Shirkadii ugu horeeysay ee soo saarta Mooto leh Musqul oo waliba si caadi ah loo kaxeeysan karo (Toilet Bike Ned). Shirkadaan ayaa Suuqyada gaadiidka ee Caalamka waxeey ku soo bandhigtay awoodeeda cusub.
Waa markii ugu horeeysay inta Taariikhda la ogyahay oo Caalamka lagu arko Mooto soconeeysa oo hadane qeeybta lagu fadhiisto loo Isticmaali karo Musqul ahaan .Motadaan oo 3 lugood leh goobtii lagu soo bandhigayay waxaa soo buux dhaafisay Saxaafada waxaana la sheegay in Shidaalka loo isticmaalo oo Gaas ah uu ka imaan doono Xoolaha .
Dalka Japan oo ku hor maray dhanka soo saarista Qalabka casriga ah gaar ahaan Gaadiidka iyo Mootooyinka ayaa waxaa Mootadaan lagu wadaa in Shirkadii soo saartay ay u gadmato maadaama Caalamka ay buuxaan dad jecel waxyaabahaan jini jinniga ama sheenada ah.
Dowlada Britain oo Soo Saartay Sharci Cusub oo Niyad Jab wayn ku ah Shacabka Soomalaiyeed ee Doonaya Nolosha Dalka Britain